Health | PRO-X Software Solution
အလုပ်လုပ်ရင်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ မျိုး
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မိမိကျန်းမာရေးအတွက် မေ့လျော့နေတာမျိုး မဖြစ်အောင် နေနိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းတွကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက သိပ်ပြီးလည်း အပန်းမကြီးတာကြောင့် နည်းနည်းချင်းစီ လိုက်လုပ်ကြည့်သွားရုံနဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ လန်းဆန်းမှု ရလဒ်ကို ရနိုင်မှာပါ...၁။ ကွန်ပျူတာကို ဆက်တိုက်ကြည့်ခြင်းလျော့ပါ။ကွန်ပျူတာသုံးရတဲ့သူတွေအတွက် နာရီပေါင်းများစွာ တစ်ဆ...
Visits : 2924
ပိုတော်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ၁၀ မိနစ်စာ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း
ပိုတော်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ၁၀ မိနစ်စာ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းအစွမ်းထက်ဆုံး စီအီးအိုတွေကအစ ကမ္ဘာကျော်အားကစားသမားတွေအဆုံး သတိရှိမှုရဖို့အတွက် တရားထိုင်တာဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ဖို့ အသုံးများတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ သတိရှိခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဟာ ပိုတော်တဲ့ခေါင်းဆောင်၊ မိတ်ဆွေနဲ့ ကိုယ့်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းချုပ်သူ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သတိရှိမှ...
Visits : 4187
ငါကောင်းအောင် လုပ်နေရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ငါ့အနားမှာ လူတွေမရှိတော့ တာလဲ ဆိုပြီးတော့ ကိုယ်ဘာလုပ်လို့ လုပ်ထားမှန်း မသိတဲ့ လူမျိုးတွေကို သင်ကြုံဖူးပါ သလား။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း အဲဒီလိုလူ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဒီအမူအကျင့် ဆိုးတွေဟာ လူတွေ ကို အဝေး ထွက်သွားစေတယ် ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု မှာ အလုပ်ထွက်နှုန်း များနေတယ် ဆိ...
Visits : 5154
7 -9of (9) records
ခါးနာသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း ၈ မျိုး